Zulf dia manan-talenta misambotra hazavana amin'ny sariny chiaroscuro | Famoronana an-tserasera
Ny arina dia tsy teknika mora, fa tena ilaina ny mianatra chiaroscuro rehefa manomboka mianatra mandoko na manao sary ny olona. Ity artista ity no mampiasa arina ary koa pastel to manaova sary vitsivitsy izay anaovan'ny jiro vinavinaina sahala amin'ny hoe tena izy io.
Zulf no mpanakanto nahavita ity andiana sary amin'ny saribao sy pastel ity miaraka amin'ny talenta lehibe amin'ny famitana. Hasehonay aminao ny sasany amin'ireo sanganasany ary mazava ho azy, ny fomba hanarahana azy amin'ny kaonty Instagram azy.
Ilay vehivavy vinavina ao amin'ny a chiaroscuro amin'ny fomba izay toa tena marina fa sarotra be ny manavaka ny sary hosodoko amin'ny sary. Izany no zava-bitan'ity mpanakanto miantso ny tenany hoe Zulf ity.
Ny asany tsirairay avy dia afaka mandray anao manomboka amin'ny 1 ora ka hatramin'ny 60. Andao holazaina fa mandany fotoana amin'ny fanapahan-kevitra ianao hoe iza no ho maodely ho an'ny iray amin'ireo asanao, ary koa ny fotoana hiasana tsirairay amin'izy ireo. Ahoana ny fandinihana ny hazavana sy ny fomba tokony handanianao fotoana hahatratrarana ireo karazana vokatra ireo?
Zulf mahay tsara milalao chiaroscuro tsara ary ny fomba ampiasany ny mombamomba ny aloka mba hanasongadinana ireo endrika sy ireo volo izay mandray izany zava-misy izany rehefa voasintona tamin'ny fomba marina toy izany.
Ny tsirairay avy ny asa dia midika fientanam-po be ho an'ny zavatra ataony sy ny maha-zava-dehibe ny fandinihana hazavana amin'ny traikefa kanto nataony. Raha niresaka momba ny saribao isika, dia maneho hevitra momba ny fampiasana pastel amin'ireo asa-tanana ireo.
Miala izahay amin'ny farany ny sarin'i Zulf amin'ny ny kaontinao Instagram ary avy amin'izany ianao dia afaka manaraka azy hahitanao ny sary sisa tavela, ary koa ireo izay iasàny. Avelanay miaraka amin'i Corneli ianao ary ny fomba mahafinaritra azy amin'ny filalaovana hazavana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo saripika misy saribao sy pastel izay misambotra ny zava-misy toy izany amin'ny hazavana novinavinain'izy ireo
Vimeo Create dia fampiharana vaovao hamoronana horonan-tsary matihanina amin'ny findainao